Basola eyokucwaswa ngokobuzwe abaxoshwa e-France | News24
Basola eyokucwaswa ngokobuzwe abaxoshwa e-France
Omunye wabahlali base-France ephethe enye yezincwadi abanikwe zona ngenyanga edlule egunyaza ukuthi baphume ekupheleni kwale nyanga.ISITHOMBE:nokulunga ngobese
BAKHALA ngokucwaswa ngokobuzwe abahlali basendaweni eyaziwa ngokuthi ise-VMC eFrance emva kokuthola izincwadi ezivela ekhanseleni zibatshela ukuthi abaphume ekupheleni kwale nyanga.
Kuthiwa kuphendlelwa indawo abantu abawumsinsi wokuzimilela kuleli lokishi. Laba hlali iningi labo elingelokudabuka endaweni yase Mzimkulu batshele iphephandaba i-Echo ukuthi bafika kule ndawo ngo-2006, okubamangazayo uma sebekhishwa manje ngoba kuthiwa kufunelwa abantu bendawo indawo abazohlala kuyona.
Bathi bafike kule ndawo okwakungamahhovisi ayakhiwe inkontilaki yakwa VMC eyayithole ithenda lokwakha izindlu zomxhaso kule ndawo ngoba bezofuna umsebenzi, bagcina sebehlala khona ngenkathi inkontilaki isihambile. Omunye wabahlali okhulume naleli phephandaba kepha ongathandanga ukudalulwa uthe: “Abaningi bethu bafike eMgungundlovu ngoba bezofuna umsebenzi. Siyalelwe ngale ndawo okuyilapho sifakwe khona omunye owayesekomitini ye-ward ngo-2006.
“Lama hhovisi anamagumbi ahlukene njengoba kukhona anayisikhombisa amanye ayisishiyagalombili. Abanikazi benkontilaki bathe uma sebehamba bashiya ukhiye kwelinye ilunga le komiti yeward. Sithe uma sesifuna indawo, lasifaka khona. Siqale ngokukhokha sagcina sesizihlalela mahhala.”
Bathe kuthe ngoMandulo walo nyaka kwafika ikhansela uNksz Sindi Gwala ehambisana nekomiti le ward, babatshela ukuthi kumele baphume kule ndawo ngoba badinga ukuyisebenzisa.
“Sitshelwe ukuthi singaMaMpondo ngakho kufanele siphume ukuze kuvulelwe isikhala abantu bendawo abahluphekile.
Ikhansela lakwa ward 18 uNksz Gwala uvumile ukuthi abahlali banikwe izincwadi zokuthi baphume ekupheleni kwale nyanga, wagcizelela ukuthi emva kwezinto eziningi ezingezinhle ebezenzeka kule ndawo, kuvunyelwane ngokuthi ivalwe.
“Le ndawo akusiyona eyami njenge khansela kodwa indawo eyashiywa abantu ababezokwakha izindlu zomxhaso . Abantu abaningi abahlala khona abantu abaqhamuka ezindaweni zangaphandle. Ngenxa yezigameko ezimbi ebezenzeka khona okubalwa kuzona ukudayiswa kotshwala, ukudayiswa ko mzimba nobugebengu obukhona, sibonisane ukuthi ivalwe.
“Sivumelane ukuthi kube indawo ezosetshenziswa izinhlangano zomphakathi,” kusho ikhansela